दही चिउरा दिउँ गर्भवतीलाई, केक र बेबी सावर होइन !
अक्कल बिनाको नक्कल ‘बेबी सावर’ - बेबी सावर' चलनले गर्भवती महिलालाई फाइदा गर्दैन
क्षमा र “दहि चिउराको” पक्षमा
केही हप्ता अघि मैले लेखेको ‘बेबी सावर’ र दही चिउराको बारेमा मलाई धेरै पृष्ठपोषण भयो । फेसबुक र पत्रिकामा धेरैले आफ्नो विचारहरू शेयर गरें, यस्तो रमाइलो पनि लाग्यो । तर लेख लेख्दा केही शब्दहरूको चयनको म बाट गल्ती पनि महसुस भयो ।
‘भुँडी देखाएर’ बेबी सावर गरेको भन्ने शब्दमा हाम्रा केही नजिकका साथी, छिमेकी र बन्धुहरूको पनि ‘कडा’ प्रतिक्रिया आयो, कस्तो भुँडी शब्दको प्रयोग गरेको भनेर । मैले पनि पछि अनुभव गरँें कि शायद गाउँ घरमा सहजै प्रयोग गरिने शब्द चाहिँ यसरी धेरै विद्धान र बिदुषीहरूले पढ्ने लेखमा राख्नु उचित थिएन कि । त्यसको लागि म क्षमा याचना नै गर्छु ।
यसरी फेसबुकमा आएका प्रतिक्रियाहरू हेर्दा अंग्रेजी भाषामा लेखिएका पृष्ठपोषणमा प्राय मलाई ‘बेबी सावर बिरोधी, ‘नयाँ तरिकाले मातृत्वको आनन्द मनाउने विरोधी’ ‘पाखे महिला’ पनि भनिएको छ ।
लेखमा केही त्रुटीहरू पनि भएको कुरा पनि लेखिएका छन् । ‘बेबी सावर’ भनेको “लिंग पहिचान गरेपछि रमाइलो गर्ने र उत्सव मनाउने’ होइन कि गर्भवती महिलाले ८–९ महिना भएपछि उनलाई उपहार दिने, रमाइलो गर्ने चलन रहेछ । यसमा चुक भएकै हो, किनभने हाम्रा विदेशी साथीहरूले बिदेशमा जाँदा ‘हामीले हाम्रो भु्रण छोरी रहिछन् भन्ने थाहा पायौ’ र बेबी सावर गर्ने विचारमा छौं, ‘तिमी पनि आउ है’ भनेर भनेका थिए । दुइ तिनवटा ठाउँबाट त्यसरी निमन्त्रणा भएको हुनाले अनुभव भयो कि शायद ‘लिंग पहिचान’ गरेपछि ‘बेबी’ सावर गरिदो रहेछ । । मैले पहिले ‘बेबी सावर’ भनेको के हो, यसको बारेमा केही अध्ययन गर्नु पथ्र्यो । शायद केही विदेशी साथीहरूलाई सोध्नुपथ्र्यो । “लिंग पहिचान भएपछि गरिने रमाइलो र बेबी सावर एकै हो कि होइन” भनेर । त्यो चुकको लागि पनि म ‘क्षमा’ चाहन्छु ।
यो लेख लेख्दा मेरो ध्येय के थियो भने शहरका मध्यम वर्गिय महिला, विभिन्न नायिका, रोलमोडेलहरूले नेपाली संस्कृतीमा भएका समारात्मक पक्षहरू नलिएर गर्भावस्थामा विदेशी ‘बेबी शावर’ को नक्कल गर्दा, गाउँमा महिलाहरू, पनि त्यसैगरी “बेबी शावर’ गर्न खोज्दा यसले समस्या ल्याउन सक्छ ।
यसले हाम्रा घरका बालबालिकाले आफ्ना जात र धर्म अनुसारको परम्परागत चलन नै बिर्सने हो कि भन्ने पनि लागेको हो । यसबाट जागरुक गराउँन यो लेख लेखियो ।
नेपालका विभिन्न जात, धर्म अनुसार गर्भवतीलाई उल्लासको रुपमा मनाउने केही चलनहरू पनि छ । तिनलाई बिर्सेर “गर्भावस्थामा “बेबी सावर’ गरे भने भोलि हाम्रा राम्रा चलन नै हराउने हो कि भन्ने डरले यो लेखेको हो ।
‘बेबी सावर’ को नक्कल गर्नेले यस्ता सामाजिक कुरामा पनि ध्यान दिए कति राम्रो हुँदो हो भनेर मैले भन्छु, दही चिउरा दिउँ गर्भवतीलाई, ‘केक र बेबी सावर’ होइन । -डाक्टर अरुणा उप्रेतीको फेसबुकबाट
अक्कल बिनाको नक्कल ‘बेबी सावर’ – बेबी सावर’ चलनले गर्भवती महिलालाई फाइदा गर्दैन
डा. अरुणा उप्रेती र नम्रता शर्मा -एकचोटि हामीलाई पश्चिमको एउटा गाउँमा एक परिवारले ‘विशेष कार्यक्रम छ, आउनुपर्छ’ भनेर आग्रह गर्‍यो । उक्त परिवारलाई हामीले चिनेको दस वर्ष भएको थियो । कठोर मिहिनेत गरेर गरिबीबाट उक्सिन दस जनाको त्यो परिवारमा सबैले योगदान गरेका थिए ।
डाक्टर अरुणा उप्रेतीको फेसबुकबाट